Wednesday . 12 August . 2020
မုံရွာမြို့ ချင်းတွင်းရေကစားဥယျာဉ်တွင် အမျိုးသား ၁ ဦး သေဆုံး
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာမြို့၊ ချမ်းမြဝတီရပ်ကွက်ရှိ Chindwin Water Park မှာ လာရောက်အပန်းဖြေ ရေကစားသူ အသက် ၃၀ ဝန်းကျင် အမျိုးသားတဦး ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
သေဆုံးသူဟာ မုံရွာမြို့၊ ရန်ကင်းရပ်ကွက်နေ အသက် ၃၁ နှစ်ရှိ ကိုအောင်မြင့် ဆိုသူ ဖြစ်ပြီး မသေဆုံးခင် ရေလွှာလျှောစီး ရေကန်အတွင်း အရက်သေစာ သောက်စားခဲ့ပြီး ရေကူးခဲ့ကာ ရေကန်ပေါ်တက်ပြီး အန်နေတဲ့တာကြောင့် ရေကူးကန်က ကားနဲ့ ဆေးရုံကြီး ပို့ဆောင်စဉ်မှာ သေဆုံးသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ကနဦး ဖော်ပြချက်မှာတော့ အရက်သောက် ရေချိုးရာက အန်ဖတ်ဆို့ သေဆုံးတာလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်းက အပန်းဖြေနေရာတွေ၊ ရုပ်ရှင်ရုံတွေ၊ ကစားကွင်းတွေ၊ ကာရာအိုကေ၊ အနှိပ်ခန်းတွေကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် မပေးထားသေးပါဘူး။ လက်ရှိ ရေကစားဥယျာဉ်ကိုလည်း ဖွင့်ခွင့်မပေးသေးဘူးလို့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောပါတယ်။
မုံရွာမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဦးခင်မောင်စိုးက “ကျနော်တို့တော့ ဘာမှတောင် မသိသေးဘူး။ အခု အစ်ကိုပြောမှ သိတာ။ ကျနော်တို့လည်း ပြန်ပြီးတော့ ဖွင့်ခွင့်တွေ ဘာတွေတော့ ပေးထားတာ မရှိသေးပါဘူး။ ဖြစ်တာလည်း မသိသေးဘူး။ ပြန်တော့ မေးကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ရေလှိုင်းတု ပါဝင်တဲ့ Chindwin Water Park ကို အခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့က ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ။ ဝင်ကြေးအနေနဲ့ လူတစ်ယောက် ငွေကျပ် ၃၀၀၀ စီ သတ်မှတ်ခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ တစ်ယောက်ကို ၁၀၀၀ ကျပ်သာ ကောက်ခံတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“မနေ့ကတော့ စနေ၊ ဥပုသ်တိုက်တော့ လူကလည်း တော်တော်စည်ကားတယ်။ ဒီဘက်က သိတဲ့အတိုင်း ဥပုသ်နေ့ဆို စျေးဆိုင်တွေ ပိတ်တယ်။ စနေနေ့ဆို အစိုးရရုံးဌာနတွေ ပိတ်တော့ အရင်နေ့တွေထက် ပိုစည်တဲ့သဘောပါ။ ရေလှိုင်းတုတော့ မဖွင့်ပေးဘူး။ ရေလွှာလျှောစီးနဲ့ စားသောက်ဆိုင်တန်းပဲ ဖွင့်တာ” လို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သူတဦးက ပြောပါတယ်။
လူသေဆုံးမှုကိုတော့ မုံရွာနယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းက သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် ၁၁/၂၀၂၀ နဲ့ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဓမ္မတာအတိုင်း သေဆုံးတာ ဟုတ်၊ မဟုတ် စစ်ဆေးတာတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။
မနက်က MRTV ကလာတဲ့ လူထုတွေ့ဆုံပွဲ LIVE ကို လိုင်းပေါ်ကနေကြည့်ရင်း စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုတွေ့တယ်
နှစ်ဖက်လုံးအိမ်ထောင်လက်ရှိ ရှိပါရက်နဲ့ ခလေးတွေမျက်နှာမှ မထောက်
အမြန်လမ်းမှာ ကားပေါ်ကို မကောင်းဆိုးဝါး တက်လာလို့ အကူအညီတောင်းပြီး ကားပေါ်က ဆင်းပြေးခဲ့ရသူရဲ့ အဖြစ်
မြိတ်မြို့၊”အိမ်မက်သစ် ဆိုင်ရှင် နဲ့ ဆိုင်ဝန်ထမ်းဖြစ်ရပ် သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာ